सालक संरक्षण दिवसः धमिरा मास्ने सालक संकटमा | चितवन पोष्ट दैनिक
सालक संरक्षण दिवसः धमिरा मास्ने सालक संकटमा
भरतपुर । धमिराले के गर्छ ? प्रायःलाई थाहा छ, घर वरपरका धेरै चिज नोक्सान गर्छ । धमिरालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अर्को जीव के होला ? सायद कमैलाई थाहा होला । सालक भन्ने जीव देख्ने मात्रै होइन, नाम पनि नसुन्ने धेरै छन् । सालक धमिराको शत्रु हो । यो जीवलाई जोगाउने प्रयासस्वरूप आइतबार सालक दिवस मनाएको पनि धेरैलाई पत्तो भएन ।
‘यसले कीरा, कमिला र धमिरा खान्छ’ सालकको बारेमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएकी हिमाली प्रकृति नामक संस्थाकी संरक्षण अधिकृत प्रतिभा कस्तालले भनिन् । हामीलाई नोक्सान गर्न सक्ने कीरा धमिरालाई प्राकृतिक तरिकाले नियन्त्रणमा लिने हुँदा सालक मानव समुदायका लागि हितकारी जीव भएको उनले बताइन् ।
तर केही वर्षयता यो जीव संकटमा परेको छ । आकारमा न्याउरी मुसोजस्तो देखिने सालकका शरीरभर बाक्ला र कडा कत्ला हुन्छ । रातिमा मात्रै चर्न निस्कने हुनाले यसलाई कमैले देख्ने गरेका छन्, तर तस्करहरु सालकको पिछा गर्दै यसलाई मारेर विदेश पु¥याउने गर्छन् । जसका कारण यसको संख्या घट्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले सालकलाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै, साइटिसले अनुसूची दुईमा राखेर यसको व्यापार व्यवसायलाई दण्डनीय बनाएको छ, तर केही वर्षअघिसम्म मासुका लागि मारिने सालक पछिल्लो समय कत्लाका लागि विदेश चोरी निकासी हुने गरेको यसका विषयमा अध्ययन गरेकाहरु बताउँछन् ।
चितवनको भण्डारा प्रहरी कार्यालयले एउटा ज्यूदो सालकसहित २०६९ मंसिर १५ गते एक जनालाई गिरफ्तार गरेको थियो । त्यस्तै, गएको असोज २२ मा प्रहरीले अयोध्यापुरी–९ मा पर्ने बाँदरझुला गाउँका इन्द्रबहादुर घलानलाई सालकसहित समायो । यी घटनाहरुले पनि सालकको व्यापार भित्रभित्रै हुने गरेको देखाउँछ ।
‘मासुका साथै यसको मोटो कत्लाको बुलेट प्रुफ ज्याकेट नै बन्छ । त्यसैले तस्करहरुले यसलाई खोजी–खोजी मार्न थालेका छन्’ संरक्षण अधिकृत प्रतिभाले भनिन् । यसको कत्लाबाट उच्च कोटीका टाँक पनि बन्ने गरेको उनले बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सालकको माग भएका कारण नेपालमा यसको तस्करी मौलाएको उनको भनाइ छ ।
विश्व संरक्षण संघ (आइयुसीएन) को तत्वधानमा तीन वर्षअघि १६ फेब्रुरीका दिन सालक संरक्षणका लागि दिवस मनाउन सुरू गरिएको हो । ‘नेपालमा हामीले दुई वर्षअघि दिवस मनाउन सुरू गरेका हौं । सरकारी तवरमा त अझै मनाइने गरिएको छैन’ हिमाली प्रकृतिकी संरक्षण अधिकृत प्रतिभाले भनिन् । उनी आईयुसीएनको सालकविज्ञ समूहको सदस्य पनि हुन् ।
अफ्रिका र एशिया महादेशको नेपालसहित चीन, भारत र श्रीलंकामा सालक पाइन्छ । विश्वमा आठ जातिका सालक पाइने गरेकोमा नेपालमा दुई जातिको सालक पाइन्छ । कालो र तामे रंगको सालक नेपालमा पाइने गर्छ । नेपालमा समुन्द्र सतहदेखि दुई हजार मिटर उचाइको क्षेत्रमा सालक भेटिएको छ । तर यसको अवस्थाको बारेमा विस्तृत अध्ययन भने भएको छैन ।
आईयुसीएनले सालकलाई जोखिमपूर्ण र खतरायुक्तको सूचीमा राखेको छ । अहिलेको अवस्था त्योभन्दा नाजुक भएको प्रतिभाले जानकारी दिइन् । सालक मारेमा वा यसको अंगको व्यापार गरेमा ४० देखि ७५ हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना, एकदेखि १० वर्षसम्म कैद या दुवै सजाय हुन सक्ने निकुञ्ज ऐनमा व्यवस्था छ ।